ဥရောပသမဂ္ဂက မြန်မာ့တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဆက်ဆံရေး ဖြတ်တောက်မည်
ရိုဟင်ဂျာလူနည်းစုများအပေါ် “အင်အား မလျော်မကန်အသုံးပြုခဲ့သည်” ကို ကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့် ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ)က မြန်မာတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဆက်ဆံရေးဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်သည်ဟု အေအက်ဖ်ပီက ရေးသားထားသည်။
ပြန်လည်နိုးထ ရှေ့လှမ်းကြွမည့် စထရင်းဟိုတယ်
စထရင်းဟိုတယ်သည် ခေတ်ကောင်းကိုလည်း ကြုံခဲ့၊ ခေတ်ဆိုးနှင့်လည်း ဆုံခဲ့ပြီ။ ကြောက်မက်ဖွယ် ယှဉ်ပြိုင်မှု ပြင်းထန်သော ဟိုတယ်လောကတွင် သမိုင်းကြောင်းကြွယ်ဝမှုနှင့် နူးညံ့သိမ်မွေ့မှု ပုံရိပ်တို့ကို အလေးပေး၍ စထရင်းဟိုတယ်က ဝန်ဆောင်မှုကို ဈေးကွက်တင်နိုင်ခဲ့သည်။
ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှု တိုက်ဖျက်ရေး အာဆီယံဦးဆောင်မှုဆုကို မြန်မာ့သြဘာ ရရှိ
၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွက် ပေးအပ်သည့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံဦးဆောင်မှုဆု (ASEAN Leadership Award) ကို မြန်မာနိုင်ငံမှ မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစုက ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာ့သြဘာသည် ဂုဏ်သိက္ခာ ကြီးမြင့်သည့်ဆုဖြင့် ပထမဆုံး အသိအမှတ်ပြုခံရသည့် တစ်ခုတည်းသော မြန်မာပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်ဟု မြန်မာ့သြဘာက.
ပြည်သူသန်းပေါင်းများစွာ၏ မျှော်လင့်ချက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်တွင် ရှိနေ
မြန်မာနိုင်ငံသည် သမိုင်းကြောင်း အပြောင်းအလဲတစ်ခုကို ရင်ဆိုင်နေရပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူတစ်ဦးချင်း အခွင့်အရေးရအောင် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကို ဦးဆောင်နေသူသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တစ်ဦးတည်းသာဖြစ်သည်ဟု ကာဒီနယ်ချားစ်မောင်ဘိုက ပြောကြားလိုက်သည်။
ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး အသွင်ကူးပြောင်းမှု မည်မျှအထိ ခရီးပေါက်ခဲ့ပြီကို အတွင်းကျကျ ဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားမှု ပြီးဆုံးတော့မည်ဟု စစ်သွေးကြွများ ပြောကြား
သူတို့ရဲ့ Twitter အကောင့်ကနေ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကြေညာချက်မှာ Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) က သူတို့ရဲ့ တစ်ဖက်သတ်ကြေညာထားမှုဟာ အောက်တိုဘာ ၉ ရက်နေ့ ညသန်းခေါင်အချိန်မှာ ပြီးဆုံးမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။
မိုင်းခွဲငါးဖမ်းခြင်းနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးက မော်ကင်းတို့ကို အန္တရာယ်ပေးနေ
Yangon Water Bus ကို ဗိုလ်တထောင်မှ အင်းစိန်အထိ စတင်ပြေးဆွဲတော့မည်
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၆ ရန်ကုန်မြစ်ကြောင်းအသုံးပြုကာ ခရီးသည်ပို့ဆောင်ပေးမည့် Yangon Water Bus ၏ ပထမဆုံးအဆင့် ခရီးစဉ်ဖြစ်သည့် ဗိုလ်တထောင်ကမ်းနားမှ အင်းစိန် အောင်ဇေယျတံတားဆိပ်ကမ်းအထိကို ကျပ် ၃၀၀ ဖြင့် စတင်ပြေးဆွဲတော့မည်ဖြစ်သည်။ “Yangon Water Bus က ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှု ပြဿနာအချို့ကို ဖြေလျော့ပေးနိုင်မယ့်.
SCL ရိုက်စားခွင်မှ သားကောင်များ၊ သို့မဟုတ် ယုံကြည်မှုပြိုကွဲခြင်း
ခေါင်းစီးဓာတ်ပုံ။ ။ ဇင်းကျိုက်ရွာလမ်းပေါ်တွင် သုံးဘီးဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်လာသူတစ်ဦး။ ဓာတ်ပုံ-ငြိမ်းစုဝေကျော်စိုး